4 Ganacsi oo khalad ah ayaa dhaawacaya SEO-ga maxalliga ah. Martech Zone
Isbeddelo waaweyn ayaa ka socda raadinta maxalliga ah, oo ay ku jiraan meelaynta Google ee 3 xayeysiis oo kor u sii riixaya xirmooyinka maxalliga ah iyo ku dhawaaqista taas Xirmooyinka maxalliga ah waxaa laga yaabaa inay dhowaan ku jiraan gelitaan lacag leh. Intaa waxaa sii dheer, bandhigyada moobiilka ee cidhiidhiga ah, badashada barnaamijyada, iyo raadinta codka ayaa dhammaantood gacan ka geysanaya tartanka sii kordhaya ee muuqaalka, iyagoo tilmaamaya mustaqbalka raadinta maxalliga ah ee isku darka kala duwanaanta iyo suuqgeynta suuqyadu ay noqon doonaan baahiyo aan jirin. Hase yeeshe, ganacsiyo badan ayaa dib loogu celin doonaa heerka ugu aasaasiga ah iyada oo aan la helin aasaaska aasaasiga ah ee SEO-ga maxalliga ah.
Halkan waxaa ah 4 khaladaad aad u badan oo SEOs ah oo sameynaya kuwaas oo matalaya daciifnimada weyn ee aagga sii kordheysa ee suuqgeynta:
1. Fulinta Qaldan ee Lambarada Raadinta Wicitaanka
Nambarada raadraaca wicitaanada ayaa muddo dheer taban ku ahaa warshadaha suuq-geynta raadinta maxalliga ah sababtoo ah awooddooda baaxadda leh ee ay ku abuuri karaan xog kala duwan, is-khilaafsan dhammaan shabakadda iyo si taban u saamayn ku leh qiimeynta maxalliga ah. Si kastaba ha noqotee, waxaa lagu hirgelin karaa si taxaddar leh si ay u siiyaan macluumaad qiimo leh ganacsiyada. Waa kuwan talooyin ku saabsan bilowga:
Waa kuwan talooyin ku saabsan bilowga:
Hal dariiqo ayaa ah inaad u dirto lambarkaaga ganacsi ee rasmiga ah hadda adeeg bixiyaha raadraaca si aad awood ugu yeelatid inaad kula socoto wicitaanada lambarkaaga jira. Wadadani waxay kaa yareynaysaa baahida loo qabo inaad markaa saxdo liisaska meheraddaada.
Ama, haddii liisaskaaga ganacsi ay haddaba ku sugan yihiin dhagax, qaab aan is-beddel lahayn oo u baahan nadiifin, horay u sii soco oo raadso nambarka raadinta wicitaanka cusub, oo leh nambarka maxalliga ah, una isticmaal lambarkaaga cusub. Kahor intaadan dooran lambar kasta, ka raadi shabakadda si aad u hubiso in weli uusan jirin raad weyn oo xog ah oo loo hayo ganacsiyo kale oo horey u isticmaali jiray lambarka (ma dooneysid inaad ku soo dirto wicitaanadooda). Ka dib markaad hesho lambarkaaga raadinta wicitaankaaga cusub, ka dib bilow ololahaaga nadiifinta nacaybka, adoo ka hirgelinaya lambarka cusub dhammaan liisaska meheraddiinna ku yaal, websaydhkaaga, iyo barxad kasta oo kale (marka laga reebo meheradaha xayeysiinta ee lacagta lagu bixiyo) ee ku xusan shirkaddaada.
Ha u isticmaalin lambarkaaga raadinta wicitaanka ee ugu muhiimsan xayeysiiskaaga lacag-gujinta ama noocyada kale ee xayeysiinta internetka. Markaad sidaa sameysid waxay yareyn doontaa awoodaada inaad lasocoto in xogtu ay ka imaaneyso organic iyo lacag bixinta suuq geynta. U hel lambarada raadinta wicitaanka ee gaarka ah ololeyaashaada lacag-bixinta ah. Kuwani caadi ahaan kuma liis garaynin makiinadaha wax raadinta, marka ma ahan inay waxyeelleeyaan isku xirnaanta xogta ganacsigaaga maxalliga ah. * Ka taxaddar inaad u isticmaasho lambarrada raadraaca wicitaannada kala duwan ololayaasha qad la'aanta, maadaama ay ka dhigi karaan shabakadda. U isticmaal lambarkaaga guud suuq-geynta qad la'aanta.
Diyaar ma u tahay inaad si qoto dheer u qoddo amniga iyo guusha raadinta wicitaanka? Akhriska lagu taliyay: Hagaha Isticmaalka Raadinta Wicitaanka Raadinta Maxalliga ah.
2. Ku darida Geomodifiers-ka Magacyada Ganacsiga Maxaliga ah
Mid ka mid ah khaladaadka ugu caansan ee ganacsiyada badan ee goobaha badani ay ka galaan suuqgeynta raadinta maxalliga ah waxay ku saabsan tahay ereyga muhiimka ah ee ku shubaya magacooda meheraddooda liisaskooda ganacsi ee maxalliga ah oo leh ereyo juqraafiyeed (magaalo, degmo, ama magacyo xaafadeed). Ilaa geomodifier ka tirsan yahay magaca ganacsigaaga sharci ama DBA mooyee, Tilmaamaha Google si cad u mamnuucaya dhaqankan, isagoo sheegaya:
Ku darida macluumaadka aan loo baahnayn magacaaga (tusaale, "Google Inc. - Mountain View Corporate Headquarters" halkii laga siin lahaa "Google") oo ay ku jiraan calaamadaha suuq geynta, koodhadhka dukaanka, jilayaasha gaarka ah, saacadaha ama xaaladda xiran / furan, lambarrada taleefannada, URL-yada websaydhka, adeegga / macluumaadka alaabta, goobta/ cinwaanka ama jihooyinka, ama macluumaadka haynta (tusaale "Chase ATM in Duane Reade") lama ogola.
Milkiilayaasha meheradaha ama kuwa wax iibiya waxaa ku jiri kara ereyo jaangooyo ah oo ku saabsan magacyada meheradaha sababta oo ah waxay isku dayayaan inay u kala soocaan mid ka mid ah laanta kale macaamiisha, ama waxay dareemayaan inay si fiican u kala sarreyn doonaan haddii liisaskooda ay ku jiraan ereyadan. Tixgelintii hore, waxaa ugu wanaagsan in loo daayo Google si loo tuso macaamilka laanta ugu dhow, taas oo Google ay hadda ku sameyso heer casri ah oo la yaab leh. Tixgalinta dambe, waxaa run ah xaqiiqda ah in magac magaalo oo aad kuleedahay cinwaankaaga ganacsi ay horumarineyso qiimeynta, laakiin ma mudna in lagu jabiyo sharciga Google si loo ogaado.
Marka, haddii aad aasaasayso ganacsi cusub, waxaad u baahan kartaa inaad ka fiirsato adeegsiga magac magaalo oo qayb ka ah magacaaga ganacsi ee sharciga ah, oo lagu daro calaamadahaaga waddada, websaydhka iyo daabacaadda, iyo salaanta taleefanka, laakiin, wixii kale seenyo, ka mid noqoshada geomodifiers ee magaca ganacsiga ma ogola Google. Iyo, maxaa yeelay waxaad dooneysaa liisaskaaga ganacsi ee kale inay u dhigmaan xogtaada Google, waa inaad raacdaa qaanuunkan ku dhowaad dhammaan xigashooyinka kale, adigoo ku qoraya magacaaga ganacsi oo aan lahayn wax beddelayaal ah goob kasta.
* Xusuusnow in ay jirto hal ka reebitaan kor ku xusan. Facebook wuxuu ubaahanyahay adeegsiga geomodifiers-ka ganacsiyada meelo badan kuyaal. Ma ogola ogolaansho isku mid ah, oo la wadaago oo u dhexeeya liisaska Meelaha Facebook. Sababtaas awgeed, waxaad u baahan doontaa inaad ku darto wax-ka-beddelka cinwaanka meherad kasta ee Facebook Meel kasta. Nasiib darro, tani waxay abuureysaa is-waafajin xog laakiin ha ka walwalin wax badan oo ka mid ah kan ka reeban. Mid kasta oo ka mid ah tartamayaashaada leh moodeello ganacsi oo meelo kala duwan ku yaal ayaa isku doon ah, oo bixinaya wax kasta oo tartan / faa'iido darro ah.
3. Ku Guul Daraysiga Sameynta Bogaga Soo Degida
Haddii meheraddaadu leedahay 2, 10 ama 200 laamood oo aad u tilmaamayso dhammaan liisaska meheradaha maxalliga ah iyo macaamiisha boggaaga, waxaad si aad ah u xaddidaysaa awoodda aad u leedahay inaad ku soo gudbiso khibrad gaar ah, oo loo habeeyay kooxaha isticmaalaha kala duwan.
Bogagga degitaanka goobta (aka 'bogagga degitaanka ee maxalliga ah', 'bogagga degitaanka magaalada') waxay ku dadaalayaan inay u gudbiyaan macluumaadka ugu habboon macaamiisha (iyo mashiinnada raadinta) ee ku saabsan laan gaar ah oo shirkadeed. Tani waxay noqon kartaa goobta ugu dhow macaamilka, ama goob uu cilmi baaris ku sameynayo kahor ama inta safarku socdo.
Bogagga degitaanka degmadu waa inay si toos ah ugu xirmaan / ka soo galaan laan kasta liisaska ganacsi ee maxalliga ah, isla markaana si fudud looga heli karo websaydhka shirkadda iyada oo loo marayo liis heer sare ah ama aaladda bakhaarrada lagu kaydiyo. Waa kuwan qaar ka mid ah qaadashada degdegga ah iyo waxyaalaha aan la samayn:
Hubso in waxyaabaha ku jira bogaggan ay yihiin gaar ah. Si fudud ha ugu beddelin magacyada magaalada bogaggan oo dib ugu daabac waxyaabaha ku jira iyaga oo dhan. Ku maalgeli qoraal wanaagsan, hal abuur leh bog kasta.
Hubso inaad waxa ugu horreeya ee bog kasta ku yaal ay yihiin NAP dhammaystiran oo goobta ku yaal (magaca, cinwaanka, iyo lambarka taleefanka).
Ha soo koobin furaha sumadaha, wax soo saarka iyo adeegyada oo lagu bixiyo laan kasta
Ku dar marqaatiyaal oo wuxuu ku xiraa astaamahaaga dib u eegista ugufiican ee laan kasta
Ha iloobin inaad ku darto tilmaamaha wadista, oo ay ku jiraan aqoonsashada astaamaha waaweyn ee soo-booqdayaashu si sahal ah ugu arki karaan agagaaraha ganacsiga
Ha iloobin fursadda inaad garoonka sababta ay meheraddaadu u tahay doorashada ugu fiican magaalada waxa isticmaalahu u baahan yahay
Ha ilaawin inaad bixiso habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiro ganacsiga saacadaha kadib (emayl, fariin taleefan, wada sheekeysi toos ah, qoraal) iyadoo la qiyaasayo inta ay qaadaneyso maqalka gadaal
Diyaar ma u tahay qoto dheer farshaxanka abuurista bogagga degitaanka magaalada ugu wanaagsan? Akhriska lagu taliyay: Ka gudubka cabsida aad ka qabto bogagga degista maxalliga ah.
4. Dayacaadda Joogtaynta
Khubarada warshadaha ayaa isku raacsan in 3-daas arrimood ay waxyeello ka badan kuwa kale u geystaan ​​fursadaha ganacsi ee ku raaxeysiga darajooyinka sare ee maxalliga ah:
Doorashada an khaldan qaybta ganacsiga marka la abuurayo liisaska meheradaha maxalliga ah
Isticmaal a been abuur ah goobta ganacsi iyo in Google lagu ogaado tan
Lahaanshaha khaldan magacyada, cinwaanada, ama lambarrada taleefannada (NAP) ee ku wareegsan shabakadda
Labada arrimood ee ugu horreeya ee diidmada ah way fududahay in la xakameeyo: dooro qaybo sax ah oo aan waligaa been laga sheegin xogta goobta. Tan seddexaad, si kastaba ha noqotee, waa midka ka bixi kara gacanta iyada oo aan milkiilaha ganacsigu xitaa ka warqabin. Xogta NAP ee xun ayaa ka imaan karta mid ama dhammaan waxyaabaha soo socda:
Maalmihii ugu horreeyay ee Raadinta Maxalliga ah markii mashiinnada raadinta ay si otomaatig ah xog uga soo saaraan ilo kala duwan oo laga helo iyo khadadka, taas oo laga yaabo inay khalad ahayd
Meherad magac beddelid, guuritaan, ama beddelashada lambarka taleefankeeda
Hirgelinta aan habooneyn ee nambarada raadinta wicitaanka
Xusuusin yar oo rasmi ah oo ku saabsan xogta xun, sida qoraallada baloogyada, wararka qadka tooska ah, ama dib u eegista
Xog wadaag ah oo udhaxeysa laba liis oo sababaya jahwareer ama liisas isku darsan
Macluumaad aan isku habboonayn oo ku saabsan bogga shirkadda lafteeda
Sababta oo ah sida xogta ganacsiga maxalliga ahi ugu dhex socoto deegaanka deegaanka raadinta, xogta xun ee hal madal ayaa hoos ugu dhici karta kuwa kale. Marka la eego in NAP xun la rumeysan yahay inay leedahay saameynta seddexaad ee ugu xun ee qiimeynta raadinta maxalliga ah, waa wax aad muhiim u ah in la ogaado oo la nadiifiyo. Nidaamkan waxaa farsamo ahaan loogu yeeraa 'xisaab hubin'.
Hantidhawrka tixraaca guud ahaan wuxuu ku bilaabmaa isku darka baaritaannada gacanta ee noocyada NAP, oo lagu daray isticmaalka aaladaha bilaashka ah sida Liistada Hubinta Mooshinka, taas oo kuu suurta gelinaysa inaad isla markiiba qiimeyso caafimaadkaaga NAP guud ahaan meheradaha ugu muhiimsan. Marka NAP xun la ogaado, meheraddu waxay ku shaqeyn kartaa gacanta si ay u saxdo, ama, si loo ilaaliyo waqtiga, waxay adeegsan kartaa adeeg lacag leh. Qaar ka mid ah adeegyada caanka ah ee Waqooyiga Ameerika waxaa ka mid ah Moz Local, Dukaan, Iyo Yext. Hadafka ugu dambeeya ee xisaab hubinta ayaa ah in la hubiyo in magacaaga, cinwaankaaga, iyo lambarka taleefankaagu ay yihiin sida ugu macquulsan ee ugu macquulsan, meelo badan intii suurtogal ah, shabakadda oo dhan.
Tallaabooyinka SEO ee Gudaha
Sanadaha soo socda, ganacsigaaga maxalliga ah wuxuu ku hawlan yahay noocyo kala duwan oo suuq-geyn suuq-geyn ah si uu ula socdo habka internetka iyo dabeecadaha isticmaaleyaashu u kobcayaan, laakiin waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin in lagu dhiso aasaas aasaasi ah oo aqoon leh. Jaangooyada NAP, u hoggaansanaanta tilmaamaha, iyo horumarinta nuxurka ee u hoggaansamaya caqliga, hababka ugu wanaagsan ayaa sii wadi doona inay la xiriiraan dhammaan ganacsiyada maxalliga ah mustaqbalka dhow, sameynta suufka dhawaaqa ka soo baxa kaas oo saldhig looga dhigayo dhammaan baaritaanka teknoolojiyada raadinta maxalliga ah. Marabtaa inaad aragto sida ganacsigaagu uga muuqdo shabakadda oo dhan?
Marabtaa inaad aragto sida ganacsigaagu uga muuqdo shabakadda oo dhan?
Hel Warbixin Liis gareyn Maxalli ah oo Bilaash ah
Tags: cinwaankaraad raadinwac lambarada raadraacameel facebookgeomodifierskhariidadaha googleGoogle+ Gudaharaadinta maxalliga ahmaxalliga ahmozdeegaanka mozmagacaDAYlambarka taleefankaSEO